Okungakumbi kwiRedmi ene-Snapdragon 855: iinkcukacha ezichaziweyo | I-Androidsis
Abalandeli beRedmi bakulindele ngolangazelelo ukufika kwe Ifowuni yeRedmi yeflegi exhaswa yiSpapdragon 855. Elona gama lefowuni okwangoku liphantsi kokusongwa, kodwa into eyaziwayo kukuba iya kubonelela ngokusebenza okuphezulu ngexabiso eliphantsi kakhulu. Nangona kunjalo, kuthiwa kunokubizwa "I-Redmi Pro 2".
Ukuqhubeka nokuthetha ngesi sixhobo, kwesi siganeko sitsha, umntu waseTshayina onolwazi, ongaguquguqukiyo ekuvuza ulwazi malunga nee-smartphones ezizayo, wabele Iimpawu eziphambili zeRedmi ene-SD855.
Ngokwengcaciso, Iflegi yeRedmi iya kudlala kwiscreen se-6.39-intshi ediagonal Kwaye, kungenjalo kungenjalo, iqonga le-Snapdragon 855 eliza kuyenza ifowuni kunye ne-8 GB ye-RAM. Emva koko, ifowuni iya kufika kunye nokugcinwa kwangaphakathi kwe-128 GB.
Iimpawu ezivuzayo zeRedmi kunye ne-Snapdragon 855
Ukuthatha iiselfie, Isiphelo esiphakamileyo siya kuba nekhamera engaphambili engama-32-megapixel. Igobolondo elingasemva lefowuni liza kuxhotyiswa ngokuseta ikhamera kathathu eya kubandakanya inzwa ephambili ye-48-megapixel, i-8-megapixel yesibini sensor, kunye ne-13-megapixel lens yesithathu.
Ezinye zeempawu ze-Redmi SD855 ye-smartphone sele iqinisekisiwe yi-CEO yeRedmi uLu Weibing kunye nabanye abaphathi beXiaomi. Ngokutsho kwezi, Isixhobo siya kuba nenkxaso kunxibelelwano lwe-NFC kwaye siya kuba nejack yeaudio.
U-Weibing ukwabango lwangoku kutshanje ifowuni yeRedmi ene-SD855 sisixhobo esifanele ukulindwanjengoko iya kubonelela ngokusebenza ngcono, iikhamera ezingcono kunye nomlinganiso ophezulu wesikrini ukuya emzimbeni.
Ukucoca ulwelo olubizwa ngokuba yiRedmi Pro 2 yohlobo lwesiTshayina
Akukho siqinisekiso kubeko lwefowuni. Ke ngoko, Kuhlala kubonakala ukuba ifowuni iya kudlala umboniso ngaphandle kwenotshi okanye i-perforation kuyo. Oku kunokuba yitekhnoloji ye-AMOLED kwaye idibanise ukufundwa kweminwe ngaphantsi, nangona okuvuza ngeli xesha kungakhange kuqinisekiswe ngezi nkcukacha.
Okokugqibela, kucingelwa ukuba iRedmi ye-smartphone ene-Snapdragon 855 inokuba sesikweni ngoMeyi okanye ngoJuni.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Okungakumbi malunga neRedmi ene-Snapdragon 855: iinkcukacha zichaziwe